दशैँको बेला मासुका परिकार खाइरहनुभएको छ ? ख्याल गर्नुस् यि कुरामा...
दशैँको बेला मासुका परिकार खाइरहनुभएको छ ? ख्याल गर्नुस् यि कुरामा…
कार्तिक ०२, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
काठमाडौं : दसैंको बेला मासुका परिकार खाइरहनुभएको छ ? तर ख्याल गर्नुस्। सन्तुलन मिलाएर मासु खाँदा शरीरलाई प्रोटिन मिल्छ। धेरै खाँदा भने स्वास्थ्यमा गडबडी हुन्छ।
मासु पौष्टिक आहार मानिन्छ। यसमा प्रोटिन पाइने हुँदा शारीरिक विकासमा सहयोग गर्छ। तर कति खाने ? धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुराले फाइदा साटो हानि गर्छ। शरीरमा उच्च रक्तचाप र युरिक एसिड बढाउँछ।
दिनमा प्रतिव्यक्ति एक पाउभन्दा थोरै मासु खाए पनि शरीरलाई चाहिने प्रोटिन भरपुर पुग्ने वरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ प्राडा. विधाननिधि पौडेल बताउँछन्। ‘सयदेखि डेढ सय ग्राम मासु खाए हुन्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ।
एक व्यक्तिले एक पाउभन्दा थोरै खाँदा नै फाइदा पुग्छ। धेरै खाँदा हानि गर्छ,’ डा. पौडेलले भने। मासुलगायतका खानपानमा हेलचेक्र्याई गर्दा दसैंमा झाडापखाला (डायरिया) र खाद्य विषाक्तता (फुड प्वाइजन) का साथै उच्च रक्तचाप हुने, कोलेस्ट्रोल बढ्ने उनको भनाइ छ।
पशुको टाउको, आन्द्राभुँडी र रक्ति सेवन नगर्न चिकित्सकको सुझाव छ। मनपरी ढंगले मासु र मदिरा खाने, तास खेल्नेलगायतका दिनचर्याले अस्वस्थ बनाउने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन्। दिनमा प्रतिव्यक्ति एक पाउभन्दा थोरै मासु खाए पनि शरीरलाई आवश्यक प्रोटिन पुग्छ
पौष्टिक आहार भएकाले मासु खानुपर्छ। धेरै चिल्लो, तारेको, पोलेको (सेकुवा) खाँदा उच्च रक्तचाप बढाउँछ। हृदयाघात एवं मस्तिष्कघाततर्फ डोर्‍याउँछ,’ उनले भने।
जनघनत्व धेरै भएका काठमाडौं, पोखरालगायत क्षेत्रमा मासुका लागि दिनहुँ पशुपन्छी किनबेच भइरहेको छ। ती रोगाएका त छैनन् ? यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ।
मसलेदार, चिल्लो एवं गुलियोका साथै मदिरा सेवन गर्दा उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र मधुमेहले पिरोल्ने सम्भावना रहेकोले खानपिनमा सजग हुनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ।
दसैंमा खसीबोका, राँगाभैंसी, च्यांग्रा, बंगुर, कुखुरा, अस्ट्रिचको मासु बढी खपत हुने गरेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले बताए। खसीबोका, राँगा, भेडाको मासुलाई रातो मासुका रूपमा लिइन्छ।
यसलाई रोगको भण्डार मानिने चिकित्सकको भनाइ छ। रातोभन्दा सेतो मासु स्वस्थकर मानिन्छ। कुखुराको मासु र माछा सेवन गर्दा फाइदाजनक हुने चिकित्सकको सुझाव छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक ०२, २०७५०८:४०
इँटा प्रहार गरी एकल महिलाको हत्या
आज नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँ, यस्तो छ उत्तम साइत!
अब विप्लवलाई अप्रत्यक्ष सघाउनेलाई पनि कडा कारबाही, हतियार बुझाउन ३५ दिनको अल्टिमेटम !
मन्त्री पुनलाई जनताको प्रश्न : महिना दिनमै किन पड्कन्छ ट्रान्सफर्मर ? पुनले तत्काल लिए एक्सन